New Year 2020 countdown premium 4.1.0 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 4.1.0 လြန္ခဲ့ေသာ4ရက္က
Application မ်ား စိတ္ႀကိဳက္ျပဳျပင္ျခင္း New Year 2020 countdown premium
New Year 2020 countdown premium ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
ရောင်စုံမီးလုံးများနှင့်မီးရှူးမီးပန်းများ၏တွေအများကြီးနဲ့မြင်ကွင်းတစ်ခုအပေါ်မီးစများ၌၎င်းပြည့်ဝ၏တစ်ဦး 2020 နှင့်အတူနှစ်သစ်ကူးဖို့နှစ်သစ်ကြိုဆိုပွဲသတ်မှတ်မည်။
အိမ် screen ပေါ်မှာနှစ်ကြိမ်နှိပ်ခြင်းဖြင့် interactive ဆောင်ပုဒ်အရောင်များကိုပြောင်းလဲရန်, သို့မဟုတ်သင် 20 ကျော် themes များအကြားကရှေးခယျြနိုငျပါသညျ! ဒါ့အပြင်သင်ဟာအချိန်ပြီးနောက်ကျပန်းအရောင်သတ်မှတ်နိုင်သည်။
အလိုအလျောက်ကင်မရာကို mode ကိုခံစားကြည့်ပါကသင်သည်ကင်မရာနှစ်သစ်ကူးန်းကျင်လှုံ့ဆော်ပေးနှင့်မည်သို့ကမြင်ကွင်းတစ်ခုအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုအာရုံစိုက်ဘယ်လိုမြင်လိမ့်မည်။ အဆိုပါကြောက်မက်ဘွယ်မြင်ကွင်းများကိုကြည့်ပါနှင့်နှေးကွေးသောရွေ့လျားမှုမြင်ကွင်းများကိုခံစား။ သငျသညျရသောအခါကျမ်းလိပ်များကိုအိမ်မှာဖန်သားပြင်ကင်မရာရှုထောင့်ပြောင်းချင်တယ်ဆိုရင်လက်စွဲကင်မရာ mode ကိုရွေးချယ်ပါ။
အဆိုပါ 2020 များအတွက်ပုံသဏ္ဍာန် Set, နယ်ပယ်, ဖျန်း, radial သို့မဟုတ်လမ်းပိုင်း radial အကြားကိုရွေးချယ်ပါ။
အဆိုပါနှစ်သစ်ကူးရဲ့နှစ်သစ်ကြိုဆိုပွဲကိုသင်ရက်, ရက်နာရီ left ပြသသို့မဟုတ် disable နိုငျသညျ, အပြည့်အဝ Configure လုပ်လို့ရတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။
အခုတော့ screensaver - Android TV ထောက်ခံမှုနှင့်အတူနေ့ခင်းအိပ်မက်။
မူလစာမျက်နှာ screen ပေါ်မှာ Long ကစာနယ်ဇင်း -> နောက်ခံများ -> နှစ်သစ်ကူးနှစ်သစ်ကြိုဆိုပွဲကို select
ဒီ app ကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲခြင်းအားဖြင့်, သင်သည် http://www.aqreadd.com/apps/eula မှာ EULA ရန်သဘောတူ
New Year 2020 countdown premium အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
New Year 2020 countdown premium အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
New Year 2020 countdown premium အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
New Year 2020 countdown premium အား အခ်က္ျပပါ
New Year 2020 countdown premium ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း New Year 2020 countdown premium အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 4.1.0
ထုတ်လုပ်သူ Aqreadd Studios
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ http://www.aqreadd.com/apps/privacy-policy/
App Name: New Year 2020 countdown premium
Release date: 2019-09-11 19:25:01
လက်မှတ် SHA1: F9:96:91:E7:3D:80:A9:BC:0D:6D:5B:38:9C:4A:90:C8:EB:31:D6:A4
ထုတ်လုပ်သူ (CN): Alfonso Villar-Costas
အဖွဲ့အစည်း (O): AQREADD SYSTEMS
နယ်မြေ (L): VIGO
ပြည်နယ်/မြို့တော် (ST): PONTEVEDRA
New Year 2020 countdown premium APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ